သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး | Page5| Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ အမြင်အာရုံ အားနည်းလာခြင်းကို မလွဲမသွေ ကြုံတွေ့ကြရမှာလား?
14.10.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
တကယ်တော့ အသက်ကြီးတိုင်း အမြင်အာရုံ အားနည်းသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ယနေ့ခေတ် နေထိုင်မှုပုံစံတွေကတော့ မျက်လုံးကို ပိုပြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါ...
3.10.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အသက်အရွယ်ရလာတာနဲ့အမျှ လူသားတွေအားလုံးဟာ စိတ်ဓာတ်တွေရင့်ကျက်လာမယ် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ မသိမသာအိုဇာလာကြမှာအမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် မိမိစားသောက်တဲ့အစားအစာ...
ဦးနှောက်အတွက်အကျိုးပြုသော ဆေးဖက်ဝင်အပင်များနှင့် ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်များ
26.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
1. နံနံပင်နှင့် စမုန်ဖြူ
ဒီအပင်တွေမှာပါဝင်တဲ့ apigenin ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးက အာရုံကြောဆဲလ်တွေအကြား ဆက်သွယ်မှုနဲ့ ဦးန...
နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာပုံစံက အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါသလား
19.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ကျွမ်းကျင်သူတွေက နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစားအစာနဲ့ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအကြား ဆက်သွယ်ချက်တွေကို လေ့လာနေကြပါတယ်။ ဒီရောဂါအစပိုင်းမှာ သာမာန်မေ့တတ်တာလ...
အသက် 65 နှစ်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် မကြာခဏသတိမမူမိသည့် ပြင်းထန်သောရောဂါလက္ခဏာစု
9.9.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
ပါရာသိုင်းရွိ်ုက်ဟော်မုန်း (PTH) အလွန်အကျွံထုတ်လုပ်ခြင်းပြဿနာသည် အသက် 65 နှစ်နှင့်အထက် အမျိုးသမီးများတွင် အမျိုးသားများထက် နှစ်ဆခန့်ပိုမိ...
သွေးပျစ်ခဲခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး သဘာ၀သွေးကျဲဆေးများ
20.8.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
သွေးပျစ်ခဲခြင်းကြောင့် နှလုံးရောဂါ အဖြစ်များနိုင်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်တွင်းကလီစာတွေနဲ့ တစ်သျှူးတွေကို ရောင်ရမ်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အကောင်...
သကြားစားသုံးခြင်းဟာ ကင်ဆာရောဂါကို ပိုဆိုးစေနိုင်ပါသလား?
2.8.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
သကြားကြောင့် ကင်ဆာပြန့်ပွားနှုန်း မြင့်တက်တယ်ဆိုတဲ့စကားကို ကြားဖူးနား၀ ရှိကြတာကြောင့် တချို့သူတွေဟာ ကင်ဆာပြန့်မှာကြောက်ပြီး သကြားစားခြင်း...
9.6.2017 | သက်ကြီးပိုင်းနှင့်ကျန်းမာရေး
အဖြစ်များတဲ့အရေပြားပြဿနာတွေဖြစ်တဲ့ ယားယံခြင်း၊ ပိုးဝင်ခြင်း၊ အရေပြားထူခြင်း စတာတွေက လူတိုင်း...